Ndị ọrụ inshọransị na-akpọku ndị na-ahụ maka ahụike maka ọrụ dị mma ka ha debanyere aha ha. – Igbo Services
Ndị ọrụ inshọransị na-akpọku ndị na-ahụ maka ahụike maka ọrụ dị mma ka ha debanyere aha ha.
By Chigo	 Last updated Jun 13, 2022
Ụlọ ọrụ mkpuchi ahụike mba akpọọla ndị na-ahụ maka ahụike ka ha nye ọrụ dị mma maka ndị debanyere aha ma hụ na ha nwere ezigbo ọrụ nlekọta ahụike.
Onye isi njikwa / onye na-ahụ maka mpaghara mpaghara, NHIA, Femi Akingbade, na-ekwu okwu na mmemme mmụta maka ụlọ ọrụ ahụike enwetara ọhụrụ kwuru, sị, “Ọ dị mkpa maka mgbatị ahụ, na-agbakwunye na ọ bụ iji hụ na ndị na-ahụ maka ahụike na-agbaso ụkpụrụ ọkọlọtọ na ntuziaka maka inye onyinye. ọrụ ka mma nye ndị debanyere aha.
“Anyị kwesịrị ịhụ na ụlọ ọrụ ahụike na-enye ndị debanyere aha anyị afọ ojuju.
Akingbade kwuru, “Anyị na-echegbu onwe anyị maka ịdị mma na anyị kwesịrị ịkụziri ha ihe anyị na-atụ anya n’aka ha dị ka ụlọ ọrụ ahụike yana iduzi ha na ụkpụrụ na ụkpụrụ maka inye ndị anyị ọrụ dị mma.”
Ndị ọrụ inshọransị ahụ gwakwara ndị na-ahụ maka ahụike ka ha gbasoo ụkpụrụ ntụzịaka na usoro ntụnye aka na ọkwa nlekọta dị iche iche.
Onye osote onye isi njikwa / onye nhazi steeti, Catherine Tanzamado, NHIA, kwuru, “Anyị na-ahụ maka inye ndị debanyere aha anyị ọrụ ọkọlọtọ. Anyị bụ ndị nwere oke egwu.
“Ọ bụrụ na ndị na-ahụ maka ahụike nwetara ya nke ọma, mgbe ahụ anyị ga-enweta ya nke ọma. Nke a bụ oge anyị kwesịrị ime nke ọma ma mee ka ha mara ihe a na-atụ anya ha n’aka, gee ntị n’ihe ịma aka ha, ma chepụta ụzọ ịga n’ihu.”
Akingbade kwukwara na iwu ịnshọransị ọhụrụ na-enye ọtụtụ ọnọdụ o
Gọọmenti Naijiria ekwela nkwa ịkwụsị ọrịa etuto enwe (Monkey pox )- Minista.